Indonesia in Focus: Qaxootiga daadadku galay Europe, ay sabab u tahay dagaalada Suuriya, Yaman ka dib markii dagaalada.
Qaxootiga daadadku galay Europe, ay sabab u tahay dagaalada Suuriya, Yaman ka dib markii dagaalada.
Kortaan ayaa la ma uusan dhammayn (367)
(Qaybta saddex boqol iyo lixdan todoba), Depok, West Java, Indonnesia, September 11, 2015, 20:19 pm).
In maalmihii la soo dhaafay Yurub daadadku socodka qaxootiga oo laga keenay Suuriya colaadda, iyo Afghanistan, iyo mar dambe qulqulka qaxootiga iman doonaa oo sabab u ah colaadda Ciraaq iyo Yaman iyo dalalka ku dhacay khilaafaadka ka gobollada kale.
Waxaa intaa dheer, colaadda Suuriya u badan tahay inuu ka sii daro leh ku lug of Russia iyo Iran si ay u caawiyaan mucaaradka Itobiya iyo kooxaha Assad oo caawiye ka ahaa Maraykanka iyo xulafadiisa.
Sii dheerayn khilaafka u dhaxeeya Ciraaq ISIS (State Islaamiga ah ee Ciraaq, Suuriya, iyo Suuriya) Dowladda ee Lagaga shiico ah ee Ciraaq caawiyay Iran iyo Xisbullah ee dalka Lubnaan iyo isbahaysiga ee 80 dal in laysku dabarida Maraykanka.
Sidoo kale xoojin doonaan dagaalada ka socda wadanka Yemen ee u dhexeeya mucaaradka Xuuthiyiinta Shiicada ka dhanka ah dawladda Yemen oo ka caawiyay Saudi Arabia iyo isbahaysiga Carabta ee Gulf Cooperation Council ah
Haddii colaadda gobolka si ay u noqdaan ka awood badan, iyadoo aan la tilmaamaynin dagaalada Waqooyiga Afrika, waxaana suurto gal ah in Libya iyo mucaaradka ka dhan ah xukuumadda maamul military ee Masar, Europe, Australia iyo Maraykanka waa diyaar u ah inay helaan socodka dheeraad ah oo qaxootiga ka tirsan gobolka dagaalka noqon.
(BBC) - Midowga Yurub ayaa ugu baaqay in ay aqbalaan qaxootiga
Madaxweynaha Guddiga Reer Yurub, Jean Claude Juncker, ayaa sheegay in Midowga Yurub ay soo wajaheen caqabado aad u daran oo leh imaanshaha qaxootiga.
Hadal uu xubnaha Baarlamaanka Yurub, ayaa Arbacadii (09/09), Juncker ku booriyay dowladaha xubnaha ka ah in ay aqbasho xaqiiqada ah in Europe ayaa loo arkaa in ay gabaad ammaan ah iyo sidoo kale calaamad u ah rajada dadka qaxootiga ah sida.
Wuxuu soo jeediyay in dheeraad ah 160,000 oo magangalyo doon ah kaalinta in dhammaan dalalka xubnaha ka ah Midowga Yurub oo leh nidaam kootada ku qabanaya.
Previous baxeen soo jeedinta kala qeybinta meelaynta qaxootiga xubin ka ah kuwaas oo markii dambe ku xujeeysay in tiro ka mid ah dalalka.
Soo jeedinta Juncker ayaa lagu wadaa in laga doodo by Wasiirada Midowga Yurub ayaa Isniintii (14/09).
Wax ka qabashada racfaanka Madaxweynaha Guddiga Reer Yurub, Chancellor Jarmalka, Angela Merkel, ayaa ku celiyay dalalka xubnaha ka ah si degdeg ah waa in Midowga Yurub ay ku heshiiyaan kootada Isaaray aan la yareeyo tirada dadka qaxootiga ah in la qaado.
Si kale haddii loo dhigo, Merkel ayaa sheegay in soo jeedinta Juncker waa baahida ugu yar iyo Midowga Yurub waa in ay aqbasho qaxootiga.
Dhanka kale Ra'iisul Wasaaraha Czech Republic, Bohuslav Sobotka, ayaa sheegay in Midowga Yurub aysan xooga saarin oo qorshe cusub, laakiin fulinta heshiisyadii ee la soo dhaafay oo ku saabsan qaxootiga iyo magangelyo-doonka.
In horumarka la xiriira, Dowladda Australia ayaa sheegay in ay soo dhaweyneynaa dheeraad ah 12,000 oo qaxooti ah oo ka Suuriya iyo Ciraaq.
Ra'iisul Wasaaraha Tony Abbott ayaa sheegay in kooxaha laga tirada badan yahay ayaa la silcin jiray, taas oo hadda doonaya magan ee Lubnaan, Urdun, iyo Turkey, heli doonaa mudnaanta.
Qaxootigan ayaa la aqbali doonaa oo deganaa ee Australia ka dhamaadka sanadka.
Kootada qasabka ah ee tirada soo galootiga in la helo ee dalalka xubnaha ka ah Midowga Yurub waa 'tallaabo hore' ah ee wax ka qabashada dhibaatada soo-galootiga.
Arrintan waxa caddeeyay Chancellor Jarmalka, Angela Merkel, iyada oo lacago sii-galootiga iyo qaxootiga, oo halkii todobaadkii la soo dhaafay.
Merkel ayaa sheegay in la wadaago Ra'iisul Wasaaraha Sweden, Stefan Löfven, oo booqanaya Germany ahaa. Labada dal ayaa waxay leeyihiin ilaa iyo haatan inta badan la jaan qaadka soo-galootiga iyo qaxootiga Suuriya.
By baaqay qorshaha midowga Yurub ee sida "ah tallaabo hore u muhiim ah ', ayuu hadalkiisa ku daray Midowga Yurub ay u baahan tahay nidaamka furan ku dhow inay kala qaybiyaan kuwa xaq u leedahay magangelyo.
Maanta, Wednesday, September 8, Guddiga Yurub u xoogayn doonaa qorshe hanato muhaajiriinta, iyo kuwo kale, qaybinta kootada ku dhowaad 120,000 oo dadka cusub ee dalalka xubnaha ka ah.
Germany ayaa sheegay in menampug laga yaabaa in ajinebi badan mustaqbalka laakiin waan jeclaan lahaa culeyska la wadaago.
Xigeenka Sigmar Gabriel ka hadlay sida uu dalka inay ka qaybgalaan ugu yaraan 500,000 oo qaxooti ah sannadkii sanadada soo socda ay awoodaan.
Arrinta kootada ayaa la filayaa in ay keento kala duwan ee Midowga Yurub.
Hungary, Czech Republic, Poland, Slovakia iyo Romania hore u sheegay mudadan, inkastoo Poland ka dib ayaa sheegay in meel laga yaabaa in ka badan waxay leeyihiin in ay ka hor bixiyaan, sida ugu badan 2,000-galootiga,
Iyadoo Spain ayaa sheegay in ay heli doonaan lacagta la dhigay Guddiga Yurub.
Germany ayaa xaqiijiyay in dalka waa ay awoodaan in ay meel ugu yaraan 500,000 oo qaxooti ah sannadkii sanadada soo socda.
Caddaynta waxaa loo sameeyey by xigeenka Sigmar Gabriel.
"Waxaan aaminsanahay waa in aan awoodin in ay meel nus malyuun (qaxootiga sanadkiiba) sanadada soo socda. Waxaan shaki ku jirin ah oo ku saabsan. Waxaa xitaa laga yaabaa in ka badan," ayuu yiri.
Laakiin waxa uu carabka ku adkeeyay in dalalka kale ee Yurub waa in ay qaataan mas'uuliyadda.
Sigmar Gabriel ayaa sheegay in Germany u baahan tahay shaqada, marka dadka waxaa hoos.
Germany awoodda la joogteeyo boqolaal kun oo qaxooti ah ayaa hadda daad, Europe, gaar ahaan dalalka sida Al-shabaab Suuriya ah, ayaa sidoo kale ka hadlay Wasiirka Maaliyadda Wolfgang Schaueble by.
Si ay xubno ka tirsan baarlamaanka Jarmalka, ayuu yiri dhaqaalaha dalka waa xoog ku filan.
Goobjooge ah ayaa sheegay in doonitaanka Germany helay qaxootiga lama sooci doonaa xaaladaha degdegga ah in ay ka dhacaan Hungary iyo midnimo ee bulshada Jarmalka laftiisa.
Germany iyo France doonayaan in ay ku faafi qaxootiga iyo dadka magangalyo doonka ah ee dalalka xubnaha ka ah Midowga Yurub, laakiin qaar badan oo iyaga ka mid ah hindise ahaa.
, Haddii soo jeedinta la isku raacay dul wadamada Midowga Yurub ee ku hanjabeen ganaax haddii ay diidaan qaxootiga iyo muhaajiriinta ku cusub wadanka Italy, Greece iyo Hungary.
Hogaamiyaha madaxda Jarmal iyo Faransiis horey soo jeedinta ku saabsan nidaamka cusub ee qaybinta qaxootiga ka mid ah dalalka xubnaha ka ah Midowga Yurub.
Madaxweynaha Faransiiska Francois Hollande ayaa sheegay in isaga iyo Jarmalka Chancellor Angela Merkel ayaa heshiis ku saabsan farsamo si ay u faafiyaan qaxootiga iyo muhaajiriinta hadda daad Europe.
Added, France ahayd ay u dulqaadan karaan 24,000 oo qof.
"Waxaan qaadi doonaa talaabo, sababtoo ah waxaan aaminsanahay in ay tani tahay mabda'a ah in duubaa France," ayuu yiri Madaxweyne Hollande, Isniintii (07/09).
"Waxaan samayn doonaa, maxaa yeelay tani waa qorshe in aynu u gaar ah, kaas oo aan u rajaynaynaa qaadan doonaan oo dhan ee Europe," ayuu yiri.
Sida laga soo xigtay isaga, oo ku salaysan qorshaha midowga Yurub ee si, qaxootiga ugu badan ee 120,000 oo lagu wareejiyay doonaa in waddamada xubnaha labada sano ee soo socda gudahooda.
Dhanka kale, Jarmalka Chancellor Angela Merkel uu sheegay in dalka aan awoodi doonaan in ay la tacaalaan dhibaatooyinka keliya, oo aad weydiisan kartaa wadamada kale si ay ugu biiraan qaxootiga.
Ilaa iyo hadda 20,000 oo muhaajiriin iyo qaxooti ayaa la qiyaasayaa in ay soo gaaray dalka Jarmalka todobaadkii la soo dhaafay, inta badan dalalka ku dhacay dagaal sida Suuriya iyo Afghanistan.
Laakiin jeedinta ee France iyo Germany horjeeda Ra'iisul Wasaaraha Hungary Viktor Orban in Xaqiijiyay kootada aan doonaynin in la codsaday oo ku salaysan nidaamka EU taagan hadda.
Dhinacyada dhibaatada qaxootiga Suuriya ay isku dayayaan in ay galaan wadamada Yurub, su'aasha baxdo sababta aysan keentay gobolka gacanka hodan ah iyo kuwa u dhaw fogaanta?
Muddo sanado ah ay gudaha u gashay Lubnaan, Urdun iyo Turkiga, laakiin waxba kuma wadamada Khaliijka.
Sida rasmiga ah, Suuriya dadka deegaanka codsan kartaa fiise dalxiis ah ama ogolaansho shaqo galaan gobolka Khaliijka ah, laakiin kharashka waa mid aad u qaali ah. Sidoo kale waxaa jira xeer aan qornayn xaddidaya reer Suuriya si ay u helaan fiisaha.
Barwaaqada iyo u dhawaanshaha gobolka Khaliijka la Suuriya hadda arimo su'aalo badan oo ku saabsan haddii ay leeyihiin ay waajib ka weyn wadamada Yurub hor jeeda dadkii Suuriya ka cabanaayo iyaguba in dagaalada daba dheeraaday ee dalka.
"Maxaad aan aad iyaga ha ku? Dadka ku fiicnayn aasaasiga ah!?" dawladaha garneel lagu cartoon Gulf gobolka.
Dadka isticmaala Twitter sawirada posted in lagu muujiyo hooggii haystay reer binu qaxootiga Suuriya, oo sawirro ka mid ah dhibbanayaasha la maansheeyey, carruurta waxaa la soo geliyey iyada oo xayndaabka Maritime Bureau ama qoys kuwaas oo sida sahlan u seexan.
Bogga Facebook A loo yaqaan Community Suuriya ee Denmark la wadaago video ah oo muujinayay in qaxootiga loo ogol yahay galay Austria dhex Hungary, la abuuro user kale ku weydiiyo, "Sidee bay u cararaan dhulka walaalaheena Muslimiinta, qofkeebaa ka mas'uul noqondoona, halkii ay dalalka ay in tixraac sida 'territory cadow'? "
Dowladda Mareykanka Gulf sii bedeli karaan booska si ay u caawiyaan walaalihiis waxay ku gateen.
Waxa kale oo user sheegay, "Waxaan ku dhaaranayaa magaca Ilaahay, Carbeeda inay gaalo adkaade ah."
Makkah maalin kasta la daabacay sawir -disebarkan ayaa sidoo kale adeegsanaya warbaahinta bulshada tusay nin ku labisan dalalka dhaqanka Khaliijka, fiiriyo silig ah hotooyin deyrka albaabka oo tilmaamay in albaabka kale calanka Midowga Yurub, isagoo leh,
"Maxaad aan aad iyaga ha ku? Dadka akhlaaq xumo aasaasiga ah!?"
Waxa cad in tani cartoon dabeecad adag oo ka mid ah dowladaha ka mid ah dalalka Khaliijka ayaa garneel.
Si kastaba ha ahaatee, waxa ay ku baaqeen badan ee warbaahinta bulshada, waddamada Khaliijka u muuqda in ay adag tahay in la beddelo si ay u caawiyaan qaxootiga Suuriya.
Wararka ka imaanaya Suuriya ayaa sheegay in kooxda maleeshiyada laftiisa wacaya Dawladda Islaamiga ah ama ISIS weerar cusub oo lagu beegsanayo saldhig muhiim ah in ciidamada Suuriya waqooyi bari.
Base Deir EZ-Zor, taas oo calaamad u noqday ka mid ah ciidamada dowladda Suuriya ee gobolka Deir EZ-Zor, garaacayeen ISIS tan iyo dabayaaqadii sannadkii hore.
"Tani waa mid ka mid ah weeraradii yihiim ISIS," ayuu yiri Rami Abdel Rahman xuquuqda aadanaha kooxda la socodka Suuriya.
Sida laga soo xigtay Rahman in dhacdadan 36 dagaal iyo 18 askari oo ay ku dhinteen dowladda Suuriya.
Ka hor qabsaday ciidamada, ISIS ayaa gacanta ku dhow gobolka oo dhan ee Deir EZ-Zor, gobolladiisa Suuriya in this saliida qaniga.
Haddii caasimadda ah ee gobolka si buuxda u adkaaday ISIS, magaalada noqday caasimadda ah ee gobolka Raqa labaad ka dib markii uu dhaco gacmaha ISIS galay.
Maalintii Arbacada (09/09), koox kale oo aad caasiyowdaan, waxaa caadi ahaan loo yaqaan Army ee Conquest, qabsadaan garoonka ciidamada ee gobolka Idlib, ee waqooyi-galbeed Suuriya, ayaa weerar lagu hayo muddo laba sano ah.
Waxaa jiray warar sheegaya in ka badan 50 askari ayaa ku dhintay dagaal for this garoonka diyaaradaha.
Idlib hadda si buuxda ay gacanta ugu jiraan kooxaha mucaaradka.
Mid ka mid ah Islaamka, Moscow - Intaa waxaa dheer in diraya gargaarka bini'aadanimo si ay u Suuriya, Russia ayaa sidoo kale markooda diraya taliyayaal ciidan ee dalka. Waxaa lagu qeexay by ah Afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee Ruushka, Maria Zakharova.
"Taliyayaal millatari u soo diray inuu Suuriya, oo ay la socdaan qaar ka mid ah hubka noo muujiyeen si ay u caawiyaan dowladda Syria ee dagaalka ka dhanka ah argagixisada," ayuu yiri Zakaharova qoraal ah, sida laga soo xigtay ka Sindonews.
Reuters ayaa Arbacadii, September 9, 2015, tani waa markii ugu horeysay ee Russia ayaa xaqiijisay in ay la taliyayaasha ciidamada u soo diray inuu Suuriya. Saadaaliyay in Russia ay sii wadi doonaan in ay u diraan-taliyeyaal xagga militariga ah si Suuriya in todobaadyada soo socda.
Markii hore waxaa la sheegay in saddex diyaaradood oo ciidamada Ruushka ayaa ka degay Suuriya ee dhowr saacadood ee la soo dhaafay. Laba kala cayncayn ah diyaarad xamuul Rafaa, kuwaas oo Antonov-124 iyo kii saddexaad waa nooc ka mid ah diyaarad rakaab markii hore la sheegay in ay saarnaayeen gargaarka bani'aadamnimada ee dalka.
War saxaafadeedka ayaa lagu muujiyeen sida xejisto United States (US) walaac laftiisa Zakharova. Adeer Sam ayaa dhab ahaan ka muujiyeen walaac la xiriira wararka sheegaya in uu sheegay in Russia ayaa ka bixinayeen gargaarka military si Suuriya.
Assistance beegsaday ee xukuumadda Bashar al-Generalada laga cabsi qabaa keeni kara in iska hor imaad la ciidamada isbahaysiga caalamiga ah.
Qatar soo dir 1000 Ciidamada Dagaalka ee Yemen
Qatar ayaa soo diray oo ku saabsan 1,000 askari si ay Yemen ku salaysan Al Jazeera TV-ga ayaa sheegay Isniintii (07/09/2015). Warkaas waa lug ugu horeeyay ee reer Qatar ee weerarada ka dhanka ah kooxda shiico Xuuthiyiinta.
Ilo millatariga ayaa sheegaya in ciidamada Qatar ku sii socday in ay Yemen iyo u diyaar inay ku soo biiraan ciidamada isbahaysiga wajihi Shiicada Xuutiyiinta ah ee magaalada Sanca - inkasta oo ay ciidamada u sheegay Reuters ayaa aan soo galay dalka ee Jasiirada Carabta.
Ka qaybgalka ee ciidamada dhulka Qatar yimaado Xarkada iskahorimaadka ka dib markii duqeyn cirka ah oo lagu dilay toboneeyo askar ah Arabian Gulf, soo xigtay wakaaladda wararka ee Reuters.
Al Jazeera warbixin Qatar ayaa sheegay in 1,000 oo askari, oo ay taageerayaan 200 gawaarida gaashaaman iyo 30 helicopters Apache ayaa la geeyay si ay Yaman.
Wasaaradda Arrimaha Dibedda ee laftiisa Qatar ayaa faallo ku saabsan warbixinta oo ka mid ah
Posted by needsjobslowongankerja at 9:23 AM